Ọnụ ọgụgụ nke ọdịda a tụrụ na waks nke osisi | Network Meteorology
David melguizo | | Ihe gbasara ihu igwe, Oké ọkọchị, Oké ifufe
Oke mmiri nke Indian Ocean
Na Indian Ocean, ego nke Mmiri na-adị iche nke ukwuu n'akụkụ ya. Mgbe ha nọ n'oké ọhịa nke Sumatra mmiri na-ezosi ike, mpaghara Ọwụwa Anyanwụ Africa nke akọrọ na-emetụta unwu. Ndị nyocha si Biodiversity na Climate Research Center (BiK-F), California Institute of Technology (CIT), Mahadum Southern California na Mahadum Bremen achọpụtala na ọnọdụ ihu igwe a na-emetụ emetụbeghị ka ọ dị n'oge akpatre isua 10000.
Otu ihe ọmụmụ onye ọkwọ ụgbọ ala bipụtara ụbọchị ole na ole gara aga na "Usoro nke National Academy of Sciences" na-enwu banyere usoro ihu igwe nke usoro mmiri ozuzo nwere mmetụta kachasị na ihu igwe ụwa. Ya mere, ọmụmụ ihe a nwere mmasị pụrụ iche nye ndị na-eme nchọpụta ihu igwe.
na ogbe okpomoku na-aru oru di nkpa na sistemu ihu igwe uwa, n’etiti ihe ndị ọzọ n’ihi na ha bụ mmalite nke ihe ndị dị egwu dị egwu dị ka El Niño na monsoons. Otu n'ime mpaghara kachasị mkpa n'ụdị a bụ Indo-Pacific, na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia ebe ọ bụ ebe kachasị ukwuu nke alụlụ mmiri nke ikuku, yana onye kachasị enweta mmiri ozuzo n'ụwa. Ndị na-eme nchọpụta achọpụtala mgbanwe mmiri ozuzo na mmiri na ọdịda anyanwụ nke ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ nke Indonesia n'ime afọ 24000 gara aga iji ghọtakwuo usoro ọdịda mmiri na mpaghara dị iche iche.
Dị ka ndị na-eme nchọpụta si kwuo, ọ na-egosi na Osimiri Indian dipole (Indian Ocean Dipole), abụwo ihe na-agbanwe agbanwe mgbe niile maka usoro ihu igwe mpaghara mpaghara maka afọ 10000 gara aga. N'etiti ihe akaebe ndị ọzọ, a na-ahụ usoro mmiri ozuzo na-adịghị mma n'akụkụ ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ nke Oke Osimiri Indian, nwere njikọ chiri anya. Akụkụ mmiri ozuzo na-egosipụta onwe ya n'ụzọ dị elu nke ọdịda mmiri n'akụkụ ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ nke Indonesia, obere mmiri ozuzo na East Africa na ntụgharị.
Ọmụmụ ihe ọhụrụ a, nke lekwasịrị anya na nkezi mmiri ozuzo na-ewere oge nke afọ 30, na-egosi na enwere usoro yiri nke a n'oge afọ iri atọ gara aga. Dr. Eva Niedermeyer (BiK-F), onye ntụzi nke ọmụmụ a kwuru, "ụdị nyocha ndị a banyere oge gara aga nwere ike inye aka ikewapụ oscillations mmiri ozuzo na nke mmadụ kpatara, dị ezigbo mkpa maka mgbanwe ihu igwe na-aga n'ihu." .
Niedermeyer na ndị ọrụ nyocha ya ejirila ngwaahịa mmiri mmiri wepụrụ n'ụsọ mmiri n'ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ nke Sumatra na omimi nke 481 mita. Ha lekwasịrị anya waxes dị na osisi alaỌ bụ akwa dị n’elu ahịhịa nke na-echebe ha pụọ ​​na akpịrị ịkpọ nkụ na ọgụ microbial ọgụ, nke na-adị n’ime nsị.
Ya mere, ọ ga-ekwe omume iwu mgbanwe mmiri ozuzo gara aga site na ịlele ihe mejupụtara hydrogen isotopic dị na osisi waxes, ebe ọ bụ na mmiri ozuzo bụ isi iyi nke hydrogen echekwara na ihe ọkụkụ. Usoro a si otu a na - eme ka ntule ntụnyere na ntụnyere obere oge na ogologo oge gara aga.
Na ngwụcha nke afọ ikpeazụ ice kara aka ịrị elu okpomọkụ na agbaze nke okpuru polar ice, nke mmiri ozuzo na-arịwanye elu gburugburu Indonesia na n'ọtụtụ mpaghara ụwa ndị ọzọ. N'aka nke ọzọ, ihe ndekọ osisi wax e kwuru n'ọmụmụ ihe ahụ na-agwa anyị na oke mmiri ozuzo n'oge Glacial Last Max na Holocene yiri nnọọ.
Oke mmiri ozuzo nke dara n'oge 24000 gara aga yiri ka ọ metụtara ogo nke ikpughe Sonda Platform na ọkachasị ọdịdị ala nke oke ọdịda anyanwụ nke mpaghara ahụ, ọ bụghị naanị na njedebe oke ọnọdụ ihu igwe nke mbibi. Nke a abụghị ihe a tụrụ anya ya, dịka ọ dabere na nyocha ndị gara aga, e chere na mpaghara ahụ dum kpọrọ nkụ n'oge Glacial kachasị karịa ma e jiri ya tụnyere ọnọdụ ndị dị ugbu a, Niedermeyer kwubiri.
Agbanyeghi na ihe omumu a gosiputara na mgbanwe ndi mmadu na-agbanwe na mmiri ozuzo adighi adighi mmadu mgbe nile, nke a aputaghi na nsogbu ndi ozo di ugbua na mba nke onu nke Indian Ocean na karisia anaghị abụkarị ndị mmadụ.
Mpaghara Indian Ocean na-enwewanye ụba mmadụ na ọnọdụ ihu igwe na-adịghị mma n’ọdịnihu nwere ike ibute esemokwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mmekọrịta ọha na eze. Ihe omuma nke oma banyere onodu ubochi na usoro zoro ezo nke na-eme ha na mpaghara a ga - enyere aka ime ka mkpebi nke ihu igwe di iche iche ma gbochie udiri esemokwu a, na - eche ihe mgbanwe ihu igwe.
Ozi ndi ozo: Oké ọkọchị na-eme ka nri erimeri na Sahel ka njọ, Indoneshia na-achọ ịda maka oke mmiri ozuzo
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Oké ọkọchị » Ole ọdịda tụrụ na osisi waks